नेपाल आइपुगे बहराइनका राजकुमार - Khabar24Nepal	Khabar24Nepal	नेपाल आइपुगे बहराइनका राजकुमार - Khabar24Nepal
पल शाह र सुपुष्पा अभिनय गरेको गीत‘हिँड्दा हिँड्दै’ सार्वजनिक
गजल ! “जनता यो पनि ता उस्तै सरकार भयो”
गजल ! “कसैले कामका औजार कोदाली पुजेका छन”
नेपाल आइपुगे बहराइनका राजकुमार
भाद्र ३१ , काठमाडौँ। बहराइनका राजकुमारसहितको टोली नेपालको दुई हिमाल आरोहणको सिलसिलामा काठमाडौँ अवतरण गरेको छ । त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार बिहान करिव ११ बजे उनीहरु चढेको जहाज काठमाडौँ आएको हो ।
उनीहरुलाई शेख इशा एयरवेजबाट विशेष विमानले काठमाडौँ विमानस्थलमा ल्याएको हो । बहराइनबाट काठमाडौंका लागि उड्नुअघि उनीहरुलाई बहराइनस्थित नेपाली दूतावासले बिदाई गरेको थियो । बहराइनको रोयल गार्डमा कार्यरत १५ जना बहराइनी नागरिक र ३ जना बेलायती यो टोलीमा सहभागी छन् । दूतावासका अनुसार यो टोली नेपालमा दुई महिना बस्ने छ । त्यसक्रममा लोबुचे र मनास्लु हिमाल आरोहण गर्नेछ । यो आरोहणलाई टोलीले आगामी वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणको पूर्वतयारीका रुपमा हेरेको बताइएको छ ।
जनकपुरमा नुहाउने क्रममा एकजनाको मृत्यु
कोरोना संक्रमित अभियुक्त आइसोलेसनबाट फरार